पाल्पाः छोरा मोहले दर्जनको जन्म ! « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
पाल्पाः छोरा मोहले दर्जनको जन्म !
२०७४, १३ भाद्र मंगलवार ०७:१८ मा प्रकाशित
सुमित्राले १३ सन्तान हुर्काउन निकै सास्ती भयो । घरमा सासू ससुरा नभएपछि बच्चा हुर्काउन समस्या भएको हो । केही बच्चा आफ्नो साथमा र केही श्रीमान्को साथ लगाएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । धेरै सन्तान भएपछि उनीहरूले एसएलसीसम्म पनि पढ्ने मौका कमै सन्तानले मात्र पाए । सुमित्रा निरोगीजस्तो देखिए पनि शारीरिक रुपमा कमजोर नै छिन् ।